Chenjerera, Zombie Computers! - Semalt Expert
Kana iwe usingadi pakombiyuta yako kana foni kuti ive zombie, chimwe chezvinhu zvikuru zvaunofanira kuchengeta mupfungwa ndezvokuti kudzivirira kuchava nzira inopfuurira. Iwe haugone kutaura kuti kana wapedza kuongorora, iwe wakagadzirirwa hupenyu hwose kubvira paZombies, uye mavairasi emakombiyuta anogona kuonekwa chero nguva.
Jack Miller, uyo Semalt nyanzvi, anotaura kuti nekufamba kwenguva, antivirus software uye anti-malware zvirongwa zvakave chikamu chehupenyu hwedu. Kunyangwe iwe uchifanira kutenga mapeji akafanana naMacafee kana kutora zvimwe zvirongwa zvisingabhadhari zvinoda AVG kubva paIndaneti, unofanira kuisa uye kuigadzirisa zvakanaka vasati vatanga kutengesa. Iwe unofanirwa kuva nechokwadi chekuti unovandudza software yako nguva dzose uye runza scan imwe kamwe kana kaviri pazuva. Izvozvo zvingasava zvinobatsira kubvisa zvirwere zve virusi uye makombiyuta, asi nzira yacho inogona kukuchengetedza usina kusununguka.
Kuisa spyware scanners
Unofanirwa kuisa spyware scanner uye woita kuti itsvake mabasa akaipa uye spyware. Zviratidzo zvaro zvakasiyana-siyana zvinoita kuti zvive nyore kuti iwe uone spyware uye malware pane yako kifaa. Lavasoft's Ad-Aware chirongwa chakanakisisa chekuenda nacho. Izvi zvinoshandisa antivirus inova nechokwadi chokuti kombiyuta yako yakanyatsoongororwa uye yakanatswa kubva kune malware neZombi.
Zvimwe, iwe unogona kuisa moto unodzivirira makombiyuta ako nemisha. A firewall inhengo ye software packages iyo inochengetedza kuchengetedzwa kwe router yako uye modem..Nguva dzose iva nechokwadi chokuti iwe unoshandisa pasepa yakasimba yekombiyuta yako. Shandisa uppercases, lowercases, uye vanhu vakasiyana-siyana uye ramba uchichinja pasepa yako kamwe chete kana kaviri pavhiki. Iyo inovimbisa kukupa zvikamu zvekudzivirirwa zvakanyanya.
Nzira yekubvisa sei malware pamakombiyuta?
Kana ukacherechedza kuti kombiyuta yako yakagadziriswa nemarware uye yakashandurwa kuva zombie device, unofanira kutora matanho mashoma kuti uchenese zvachose. Kana iwe uine nyore kuwana kombiyuta scanner, unofanira kumhanya uye unodzivirira kuuya kwemarware uye mavairasi. Kuwanda kwezvirongwa zvekuvhara utachiona zvinowanika paIndaneti. Zvinosuruvarisa, vanhu vanomanikidzwa kubvisa uye kuvhara mafaira ayo anonyanya kuchinjwa nemavhidhiyo emakombiyuta. Asi hapana chinotinetsa kana iwe wakagadzira mafaira ekuchengetedza pane imwe kifaa. Iwe unogona kuisa mafaira aya kune imwe yako kese kana kuongorora kwapera.
Kombiyuta yako ndiyo inonyanya kugadzirisa ruzivo. Zvinosuruvarisa kuti vatengesi vanoshandisa nhamba dzenyu pachavo kuti vawane ruzivo rwakananga uye nhoroondo yako yebhangi yebhangi. Kana iwe ukaramba wakangwarira paIndaneti uye uchitevera mazano akajeka, iwe unogona kugara wakachengeteka kubva kune malware, mavairasi uye zombikombiyuta zvekombiyuta zvakanyanya.
Kubva munaJuly kusvika kuDecember 2006, ma-email akasiyana-siyana akaongororwa kuti ave nhema, uye Google Analytics yakanyorera traffic spam. Spam yakave yakanyorwa muChirungu ichiita kusvika makumi matanhatu kubva muzana ye spam yose paIndaneti. MuAmerica, yakatanga makore akapfuura uye yakave makumi mana kubva muzana ye spam yenyika. Zvinopfuura 9 kubva muzana emaZombi eEndaneti zviri zveUnited States, uye rimwe chete pane gumi nemakumi maviri rakadzivirirwa spam emails rine zvinyorwa zvinotyisa Source .